DEG DEG: C/qani Saciid Carab oo loo doortay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya – Gool FM
DEG DEG: C/qani Saciid Carab oo loo doortay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya
Dajiye November 15, 2018
( Soomaaliya) 15 Nof 2018. Doorashadii 7-aad xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa la soo gaba gabeeyay maanta oo khamiis ah waxaana kusoo baxay C/qani Saciid Carab oo xilkan loo doortay.
Doorashada waxaa Cod ku lahaa guud ahaan 25-ka koox ee dalka ka dhisan iyo saddex urur oo kala ah Ururka macallimiinta, ciyaartooyda iyo kan garsoorka.
Waxaa goobta xaadir ku ahaa masuul dhanka FIFA Ka yimid, wafdi ka socda CAF oo uu hoggaaminayo Saleebaan Waabari oo ka tirsan guddiga fullinta CAF, guddoomiyaasha kooxaha dalka, horjoogayaasha Kubadda cagta ee Maamul goboleedyada iyo marti sharaf kale.
Sidoo kale guddoomiye ku xigeenka koowaad waxaa loo doortay Cali Shiine, oo ah shaqsi kaalin weyn ka qaatay soo nooleynta kubadda cagta Soomaaliya, halka guddooniye ku xigeenka labaad uu kusoo baxay C/laahi Shiikh Nuur.
Xubnaha guddiga Fullinta ayaa sidoo kale la doortay waxaana kusoo baxay
1:Abuukar Isloow Xuseen.
2: Cabdisamad Shiikh Qaasim.
3: Yaxye Maxamed Abuukar (Aayoow)
4: Cumar Maxamuud Nuur (Mugaambe)
5:AC/laahi Cusmaan Daami.
“Barcelona way ka qoomameyn doonto 10-ka sano ee soo socota qaladkii ay ku kaceen”
“Waxaan ku guuleysan karaa dhamaan tartamada kala duwan ee xili ciyaareedkan” - Emilio Butragueno